Pakistan: Fisaonana ireo namoy ny ainy tamin’ilay fianjerana fiaramanidina · Global Voices teny Malagasy
Pakistan: Fisaonana ireo namoy ny ainy tamin'ilay fianjerana fiaramanidina
Voadika ny 03 Aogositra 2010 21:07 GMT
Fahitana ny toeran'ny fianjerana tany #Islamabad avy eo amin'ny tafo trano. Sarin'i Rezhasan ao tamin'ny Twitpic
Tamin'ny marainan'ny 28 Jolay, 2010, nianjera tao amin'ny vohitr'i Margalla tany Islamabad, renivohitr'i Pakistan, ny zotram-piaramanidina Airblue ED 202 avy any Karachi, . Mihoatra ny 150 ireo mpandeha tao anatiny tamin'ny fotoana nianjerany, tsy nisy na iray aza avotra. Niteraka hatairana sy alahelo ity tranga voina ity. Mbola eo ampanaovana ny fanadihadiana ireo antony mety nahatonga ity fianjerana ireo tompon'andraikitra. Raha mbola misaona ity loza ity ny maro, ny sasany kosa dia mametram-panontaniana maro momba iny fianjerana iny.
Kalsoom Lakhani ao amin'ny CHUP-Changing Up Pakistan nisaona ity voina mampahalahelo ity:
Ity tranga androany dia mazava ho azy fa naseho tamin'ireo sary sy ireo horonantsarin'ireo fianakaviana sy naman'ireo izay namoy ny ainy, izay nihazakazaka nankany amin'ny hopitaly sy tany amin'ireo fakana tapakila any amin'ny seranam-piaramanidin'Islamabad tamin'io maraina io nitady vaovao mikasika ireo havany tamin'alahelo. Nilaza ny primatiora tantanin'i Yousaf Raza fa nanapa-kevitra ny minisitera federaly hametraka ho “andro fisaonana manerana ny nosy” ho an'ireo maty tao anatin'ilay Airblue sidina ED202 ny andro androany. Atokanay ho an'ireo fianakaviana sy ireo namoy ny ainy androany ny eritreritray sy ny vavakay.
Koa satria mbola mitohy ny fanadihadihana dia mbola aloha loatra ny maminaviana ny antony mety nahatonga ny fianjerana . Ireo tatitra faramparany dia nilaza fa hita ny boaty mainty, izay manamora ny fanadihadiana. Manadihady lalina amin'ireo fomba rehetra mety hanampona ireo fanadihadihana i Kalsoom Lakhani :
Inona marina ny “boaty mainty,” hoy ianao? Araka ny voalazan'ny HowStuffWorks, mitodika any amin'ny rakitry ny sidina sy ny feo voaray ny fahadihadiana hamantarana izay nampianjera ity fiaramanidina ity. Eo amin'ny $10,000 ka hatramin'ny $15,000 eo ho eo ny vidiny (tsy fantatra na manana modely mitovy amin'izany ny orinasam-pitaterana an'habakabaka Pakistaney na tsia), ireo boaty mainty ireo no mirakitra amin'ny antsipiriany ireo zava-nitranga nialoha indrindra ity loza ity. Araka ny voalazan'ny Dawn, Mpandraikitra ny mikasika ny Fiaramanidina Sivily (CAA) dia efa hita ity boaty mainty ity, noho izany dia holazaina amin'ny manaraka ny antsipiriany mikasika ny nampianjera ity fiaramanidina ity, (na dia tsy nanan'i Pakistan aza ny “manamora” ny fikirakirana ireo fitaovana ireo araka ny tatitry ny GEO).
Ho fahatsiarovana ireo amoy ny ainy tamin'ity fianjerana ity. Maryam Piracha nizara ny alahelony:
Miady ny saiko eo amin'ny hevitra sy ny finoana, miady eo anoloan'ny fanamarinana sy ny fanekena. Tsy misy ny fomba tsotra hizorana an'izany, afa-tsy ny fivavahana ho an'ny fanahin'ireo maty sy ny fankaherezana ireo nilaozana.
Nahazoana fanakianana henjana ny fomba fitateran'ny media an'ity tranga mampahalahelo ity. Ahsan Butt ao amin'ny Five rupees, namely ny tsy firaharahiana filazalazana momba ity fianjerana ity:
Noho ireo zava-mahagaga ao amin'ny aterineto, afaka mijery ireo famoaham-baovao Pakistaney maro aho min'ny fotoana maro aho na dia mipetraka any Chicago aza, fa tsoriko fa nopihiko manodidina ny 90 segondra aloha taorian'ny namelomako azy ny maraina teo. “Tsy mampihetsi-po” ka naleo aza tsy notaterina akory. Fampahatsiarovana ho an'ny vondrona mampita vaovao : TOKONY IDIFIANA NY MANENJIKA NY HAVAN'IREO MATY NIARAKA AMINA FANDRAISAMPEO SY FAKANTSARY KA MAKA AMPAHANTENY HANAOVANA LAHATSORATRA. Hotahian'Andriamanitra ianareo, ajanony izany fanao izany. Ataonao aorian'ny fanafihan'ireo mpampihorohoro sy ireo fanapoahana izany, ataonao aorian'ny loza voajanahary ary izao dia aorian'ny fianjerana fiaramanidina. Fa ataonao inona izany e?
Nandritra ny fitateran'ny media ny mikasika ity fianjerana ity dia hita fa maro ireo fantson'ny TV no mifantoka amin'ny fivarotana izany vaovao izany fa tsy mitatitra amim-pahamatorana. Ao amin'ny blaogiko, niresaka mikasika ny tsy fandraisan'ny media andraikitra sy ny fomba fitantarana tsy mampihetsi-po:
Manorisory ny fianakavian'ireo namoy ny ainy mba hanoratana lahatsoratra momba azy ireo, manaraka ao aoriana sy mampanakaiky ny amin'ny fakantsary ny endriky ny olona misaona ny fahafatesan'ireo havany. Mbola loza noho izany ireo sary mipoitra avy eo amin'ny toeran'ilay fianjerana, manakaiky ireo pentin-drà sy ireo tapatapaky ny vatan'olona miparitaka miaraka amin'ireo fatim-by, raha nisy mpanao gazety iray tsy manafina ny hafaliany manofahofa ny antotan-taratasy sy ny kara-panondro hita tao an-toerana. Tsy nieritreritra ny mety ho fiantraikan'ny fitaterana vaovao tsy tompon'andraikitra tahaka izao ireo fantson'ny media na indray mandeha aza, ny hahatonga ireo vaovao hahataitra sy hampaminavina ny fisian'ny theorie de la conspiration ihany no ao an-tsain'izy ireo. Tsy niandry ora vitsy akory izy ireo mialoha ny hanapaingorana ny fisian'ny fahadisoana, ary tsy ampy elanelan'ora fohy monja dia lasa fanadihadihana mikasika ny fianjeran'ny fiaramanidina ny fitatera-baovao. Mba haharatsiratsy kokoa ny toe-draharaha, nisy fantsona manokana iray lasa lavitra ary niteny fa hamboraka ny tahirim-peon'ny resaka nifandraisan'ny Mpanamory sy ny eny amin'ny tilikambo, alohan'ny hivoahan'ny fanambaranaofisialy mahakasika izany. [..] Tsy misy mihitsy hanamarinana ny fitateram-baovao tsy manana fitsipi-pitondran-tena amin'ny iray amin'ireo loza mampalahelo indrindra nitranga tany Pakistan. Mampifantoka ny sain'ny olona fotsiny amin'ny filana ny fanamafisana ny fitsipi-pitondrantena sy mahatonga fandrafetana lalàna misahana ny fandikan-dalàna ny fomba fitateram-baovao tsy manjary tahaka izao.
Mampifantoka amin'ny tokony hanatsarana ny rafitra fikarakarana sy famonjena voina ny fisian'ny loza tahaka izao, filazana vaovao tompon'andraikitra amin'ny tranga tahaka ireny ary ifotorana tsy azo idifiana ny fisian'ny manampahaizana manokana hanafaingana ny fanadihadihana. Koa satria miresaka ny tohin'ity loza ity izao, mamarana aho:
Hatramin'ny nielezan'ny vaovao, mila mifehy tena aho tsy hanombatombana ny antony nahatonga iny fianjerana iny. Fa ny zavatra fantatro amin'izao aloha dia 152 ireo olona namoy ny ainy tamin'iny loza iny, amin'ny maha firenena misaona antsika dia mila miaraka amin'ireo namoy ny havany isika, mila mitandrina mba tsy hamadi-dresaka sy ny fanomezana vahana eritreri-dratsy. Raha misy ny zavatra iray tokony hisongadina, tokony ny fanirian'ireo olon-tsotra izay nihazakazaka teny amin'iny toerana iny sy nalala-tanana hanampy sy hanohana ireo ekipa mpamonjy izany.